#StayinMyDistrict Historic Heritage in Coos Bay - I-Airbnb
#StayinMyDistrict Downtown Coos Bay! Indawo yokuhlala enhle nethule eduze kwedolobha laseCoos Bay Shopping, Dining & Entertainment. (amabhulokhi angu-6-8 ibanga lokuhamba). Leli gumbi lokulala eli-1 lokugezela eli-1 leSuite lilala kufika ku-(4). I-Comfortable & Cozy ne-charm yakudala nezibuyekezo zesimanje zenza indawo emnandi yokuhlala e-Coos Bay. Ifenisha ngokugcwele, Ikhebula ne-WIFI, ikhishi eligcwele, i-WD nendawo yokupaka YAMAHHALA. Indawo yangaphandle & Nenja Kunobungane ngokugunyazwa kwangaphambili.
Ikhishi eligcwele lihlomele ukwenza ukupheka kujabulise futhi kusebenze kahle. Izinto zikagesi ezigcwele usayizi ohlanganisa isiqandisi, isitofu, i-microwave, i-coffee maker, igedlela likagesi kanye ne-toaster. Izitsha, izitsha nezinto zokupheka eziyisisekelo zifakwe ukuze kube lula kuwe.
Indawo yokudlela inetafula lokudlela elinezihlalo ezifika ku-(2) kanye netafula le-bistro ekhishini elinezihlalo ezengeziwe (2) ezingasetshenziselwa ukuhlala noma ukulungiselela ukudla.
Gcoba kusofa onethezekile ngengubo nencwadi, noma ubambe imibukiso yakho eyintandokazi. Usofa ugoqeka ube ngumbhede ogcwele izivakashi ezengeziwe. Indawo yokuhlala inezindawo zokuhlala ezengeziwe kanye nendawo yokusebenza emisiwe. Isikrini esikhulu esiyisicaba se-Smart TV, esiphelele ngeNetflix, i-Amazon, ikhebula ne-WIFI ukuze uqedele izidingo!
Inkosi enethezekile enombhede olingana nenkosi. Amalineni ekhwalithi anikeziwe kanye nesikhala esikhulu sekhabethe lokugcina izinto zomuntu siqu zezivakashi. I-TV yokukhweza odongeni ngekhebula namandla ahlakaniphile. Isitulo esihlezi sokufunda incwadi noma ukubukela ukushona kwelanga kunkosi. Kuhle!
Jabulela ikhofi lakho lasekuseni noma ingilazi yewayini endaweni yokuhlala eyimfihlo kuvulandi ongemuva ovalekile. Kukhona futhi i-patio evamile yangemuva ene-propane BBQ, indawo yokucima umlilo yegesi kanye nezihlalo ezibheke ngemuva kwendlu.
Iwasha egcwele usayizi ogcwele kanye nesomisi inikezwe endaweni ejwayelekile yokuwasha. Ilondolo liyi-coin-op futhi lithatha isikweletu/idebhithi.
(1) Indawo yokupaka YAMAHHALA endaweni yokupaka engemuva. Ukupaka emgwaqweni AKUVUMELEKILE phambi kwezakhiwo ezingomakhelwane futhi abephula umthetho bazonikezwa amathikithi.
Sivumela kufika (2) izinja ezigunyazwe kusengaphambili ngenkokhelo eyengeziwe yesilwane esifuywayo engu-$30. Ngeshwa, ASIWAmukeli Amakati ngenxa yokungezwani komzimba nezinto ezithile. Qiniseka ukuthi uyasazisa ukuthi uhlela ukuletha isilwane esifuywayo futhi ufunde futhi uqonde Inqubomgomo Yezilwane Ezifuywayo ngaphambi kokubhuka nesilwane esifuywayo.
I-TV ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Roku
Lesi sakhiwo sisendaweni ethule yokuhlala ecishe ibe ngamabhulokhi ayi-8-10 ukusuka edolobheni laseCoos Bay kanye neBay front. Thatha Uhambo Olungokomlando Lokuhamba E-Coos Bay funda Ukwakha Isikebhe noma Ukuvakashela Izindunduma. Vakashela i-Coos Art Museum yedolobha ukuze uthole imibukiso esezingeni lomhlaba. Jabulela i-Oregon Coast Music Festival edume izwe lonke ngoJulayi. Vakashela izibani zeholide zaminyaka yonke eziboniswa e-Shore Acres State Park eseduze ngoDisemba. Imakethe yabalimi yedolobha laseCoos Bay ngoLwesithathu idume kakhulu. Njengoba ulwandle luqhele ngamamayela ambalwa nje, i-Bay, kanye nemifula namahlathi amaningi asogwini, ungajabulela ukudoba okumnandi kanye nezinhlobonhlobo zemisebenzi yangaphandle.